Mas'uuliyaddayada - Fuzhou Huasheng Textile Co., Ltd.
Huasheng, shirkadda iyo shakhsiyaadka waxaa ku waajib ah inay u dhaqmaan sida ugu wanaagsan ee deegaankeena iyo guud ahaan bulshada.Annaga, aad ayay muhiim noogu tahay in la raadiyo ganacsi aan faa'iido uun ku jirin, balse sidoo kale gacan ka geysta daryeelka bulshada iyo deegaanka.
Tan iyo markii la aasaasay shirkadda ee 2004, for Huasheng mas'uuliyadda dadka, bulshada iyo deegaanka ayaa ciyaaray doorka ugu muhiimsan, taas oo had iyo jeer walaac weyn u ah aasaasaha shirkadda our.
Masuuliyaddayada saaran shaqaalaha
Shaqooyin sugan/waxbarasho nolosha-dheer ah/Qoyska iyo Shaqada/Caafimaadka oo ku habboon ilaa hawlgabka.Huasheng, waxaanu siinaa qiime gaar ah dadka.Shaqaalaheenu waa waxa naga dhigaya shirkad adag, waxaan iskula dhaqmeynaa si ixtiraam, qadarin, iyo dulqaad.Diiradayada kala duwan ee macaamiishayada iyo kobaca shirkadeena waxa kaliya oo suurtogal ah iyadoo lagu salaynayo.
Mas'uuliyadda naga saaran deegaanka
Dharka dib loo warshadeeyay / Alaabta baakadaha deegaanka/ Gaadiid hufan
Si aan gacan uga geysanno deegaanka oo aan u ilaalinno xaaladaha nololeed ee dabiiciga ah, waxaan la shaqeynaa macaamiisheena si aan u isticmaalno fiilooyinka dhulka u fiican, sida polyester-ka dib loo warshadeeyay oo tayo sare leh oo laga sameeyay dhalooyin caag ah iyo alaabada adeegtada ka dib.
Aan jeclaado dabeecadda.Aynu ka dhigno dhar Eco-saaxiibtinimo.